Masakni Gaafataa saxaaxa gaafata kuusdeetaaf si gargaara. Gaafatni olkaa'ame kan waamamu , GUI irraa, ykn ajaja afaan SQL battaluma uumame fayyadamuuni.
Masaka Gaafataa - Filannaa Dirree
Gaafata uumuuf gabatee ifteessa, dabalataan gaafata keessatti dirreewwan kam akka qabuu barbaadde ifteessa.
Masaka Gaafataa - Tartiiba Fooyinsaa
Galmeewwan deetaa gaafata kee keessa jiran tartiiba fooyinsaa adda baasa.
Masaka Gaafataa - Haalata Barbaachaa
Gaafata gingilchuuf haalata barbaachaa adda baasa.
Masaka Gaafataa - Haalawwan Gurmeessuu
Maqaa gaafata galchi, erga masakni dhumee booda agarsiiuu ykn fooyyeessuu akka barbaadde adda baasa.
Title is: Masaka Gaafataa